December 2015 - iftineducation.com
iftineducation.com – Waxaad loo hadal hayaa dalka Mareykanka Askari ka tirsan Ciidanka Booliska dalkaasi oo fal fool xun kula kacay Wiil Soomaali ah. Muuqaal la soo dhigay Twitterka ayaa muujinayo Sarkaalkaasi oo Dareewal Soomaali ah surka ka qabtay, kadibna cadaadiyey, si uu gaarigiisa uga kaxeeyo goob gaadiidka la dhigtay oo ku taalla Degmadda Richfield ee Gobalka Minnesota ee dalka Maraykanka. Dhacdadan…
iftineducation.com – Wargeyska Mail Guardian Africa ee kasoo baxa dalka K/Africa ayaa qoray in mas’uuliyiin ka tirsan dawlada Uganda ay soo jeediyeen in ciidamada dalka Burundi Soomaaliya laga saaro haddii madaxda dawlada Burundi ku adkaystaan inay diidaan in ciidamo nabad illaalin ah wadankaasi la geeyo. Wargeyska oo soo xiganaya saraakiil ka tirsan dawlada Uganda oo sheegaya inay lama huraan tahay M/weynaha…
iftineducation.com – Waxaa waydaan danbe soo badanayey Gabdhah somalida ee guursado raga cadaan ka taas oo ah mid aheyn dhaqanka somalida ayna ka faani jireen Raga Cadaanka gaalada ah Gabdhihii waayadii hore soo nolaal lakiin wayadaan daneb Gabdhaha Qurbaha ku nool ayaa waxey ka dhigtaan faan Guursiga Ajnabiga. HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
Fanaaniinta Hodan Cabdiraxman “Idil Cadow iyo Axmed Rsta Oo Dhiig Ugu Deeqay Bukaanka Ku Jira Madina Hosbital+VIDEO
iftineducation.com – Fanaaniinta Hodan Cabdiraxman “Idil Cadow iyo Axmed Rsta Oo Dhiig Ugu Deeqay Bukaanka Ku Jira Madina Hosbital+VIDEO Fanaaniinta Hodan Cabdiraxman Idil Cadow iyo Axmed Rsta oo dhiig ugu deeqay Bukaanka Madina Hosbital, maxaa kaqurux badan in muwaadinkastaa oo caafimaad qabo dal iyo dibadba haka miyaadee caawinkaro dadkiisa sidii awoodane u caawiyo waa howl kudayasho mudan. HALKAAN KA DAAWO MUUQAALKA
iftineducation.com – Maxkamad ku taalla Magaalada Garoowe ee Caasimadda Gobolka Nugaal ayaa maanta oo Khamiis ah waxaa la rajeynayaa in la soo taago Labo Nin oo u dhashay wadanka Indonesia islamarkaana Puntland ay ku Eedeeysay in ay yihiin Kaluumeysato Sharci daro ah. Shalay ayaa lagu waday in Labadaan Muwaadin ee u dhashay Dalka Indonesia in Maxkamadda Garoowe la soo taago,balse ay…
iftineducation.com – Wasaarada Batroolka ee dalka Sucuudiga ayaa sheegtay inaysan hoos u dhigi doonin cadadka shidaalka ay maalin walba soo saaraan xili qiimaha shidaalka ee caalamka uu marayo heerkii ugu hooseeyey, taasi oo dhaawac ku noqotay dhaqaalaha Sucuudiga. Dalka Sucuudiga oo ah kan adduunka ugu horeeya dhanka soosaarka saliida ayaa 80% illaa 90% dakhligiisa ka hela shidaalka uu adduunka u beecgeeyo,…
iftineducation.com – Maxkamada magaalada London ayaa Salaasadii shalay lasoo hortaagay nin iyo xaaskiisa oo la sheegay inay qorsheenayeen weeraro argagaxiso oo lagu qaadi lahaa goobo ku yaal caasimada UK. Mohammed Rehman oo ah 25 sano jir iyo xaaskiisa Sana Ahmed Khan oo ah 24 jir ayaa lagu soo eedeeyey inay gurigooda ku sameenayeen bambaanooyin ay doonayeen inay ku fuliyaan weeraro ismiidaamin…
iftineducation.com – Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa khudbadiisa Sanadka Cusub baaq ugu diray Madaxweynaha Maraykanka Barack Obama. Putin ayaa sheegay in wadashaqeynta labada dal ay xal u keeni karto dhibaatooyin badan ee dunnida ka jira, isagoo sheegay in loo baahan yahay inay si wadajir ah isaga kaashadaan dhanka amniga. Baaqa hogaamiyaha Ruushka ayaa u muuqda mid Maraykanka looga codsanayo inuu wax…
iftineducation.com – Maamulka Caasimada Belguim ee Brussels ayaa sheegay in la joojiyey xafladihii habeenka sanadka cusub (Caawa) ka dhici lahaa fagaarayaasha waaweyn ee magaaladaasi. Arrintan ayaa la xariirta cabsi laga qabo weeraro argagaxiso oo dalkaasi ka dhaca. Salaasadii ayaa sare loo qaaday heeganka ciidamada dalkaasi si ay uga hortagaan weeraro la sheegay inay qorsheenayaan kooxaha argagaxisada. Waxaa xalay baaritaano lagu sameeyey…
iftineducation.com – Pierre Nkurunziza, Madadaxweynaha Burundi, ayaa wuxuu markii ugu horeysay uu shaaca ka qaaday inay la dagaalami doonaan, haddii dalkaasi la keeno ciidan ka socda Midowga Afrika. Wadamada Midowga Afrika, ayaa ku hawlan, sidii shan kun oo askari ay ugu diri lahaayen Caasimadda Burundi ee Magaalada Bujumbura, si ay kaga hortaggaan rabshado ku dhex mara Ciidamada Dowladda iyo mucaaradka. Madaxweynaha…